पुटिनले कसरी क्रिमियालाई रुससँग गाभेका थिए ?
काठमाडौँ । क्रिमिया गणतन्त्र आधिकारिक रूपमा युक्रेनको भाग हो । यो कालो र एजोभ सागरबीचको प्रायद्वीप युक्रेनको दक्षिणमा स्थित छ । २०१४ को प्रारम्भमा, क्रिमिया शीत युद्धपछि पश्चिम र पूर्वी संकटको केन्द्रबिन्दु थियो । त्यसपछि युक्रेनमा रुस समर्थित राष्ट्रपति भिक्टर यानुकोविचले राजधानी किभमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि राजीनामा दिनुपरेको थियो । त्यसपछि रुसी सेनाले क्रिमियन प्रायद्वीप र क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
क्राइमियामा रुसी भाषी जनसङ्ख्या बहुसंख्यक छन् र उनीहरूले जनमतसंग्रहमा रुसको साथ जाने पक्षमा मतदान गरेका थिए । युक्रेन र पश्चिमी देशहरूले क्रिमियालाई रुससँग गाभ्नु गैरकानुनी मान्दै आएका छन् ।
क्रिमिया १७८३ मा क्याथरिन द ग्रेटको शासन अन्तर्गत रूसी साम्राज्यमा संलग्न भएको थियो र १९५४ सम्म रूसको भाग थियो । सोभियत नेता निकिता ख्रुश्चेभले युक्रेनलाई दिए । रूसी जनसंख्या क्रिमियाको जनसंख्याको बहुमत भएको छ, तर युक्रेनी र क्रिमियन टाटार (टर्क को एक जाति) को अल्पसंख्यकहरु पनि यहाँ बस्छन् । शताब्दीयौंको ग्रीक र रोमन प्रभावको कारण, क्रिमिया १४४३ मा टाटर खानतेको केन्द्र बन्यो । पछि यो ओटोमन साम्राज्यको हिस्सा भयो ।
१९औं शताब्दीको मध्यमा, प्रतिद्वन्द्वी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाहरूले क्रिमियन युद्धको नेतृत्व गर्यो । १८५४ को क्रिमियन युद्ध रूस र बेलायत, फ्रान्स र ओटोम्यान साम्राज्यबीच भएको थियो, जसमा रूस पराजित भयो । बोल्सेभिक क्रान्तिपछि, क्रिमियाले रूस भित्र एक स्वायत्त गणतन्त्रको स्थिति प्राप्त गर्यो । क्रिमिया सन् १९४० को शुरुमा नाजीहरूले कब्जा गरेका थिए ।
स्टालिनले टाटारहरूलाई जर्मन आक्रमणकारीहरूसँग मिलेर १९४४ मा ठूलो संख्यामा मध्य एशिया र साइबेरियामा निर्वासन गरेको आरोप लगाए । तीमध्ये अधिकांशको मृत्यु भएको थियो । बचेकाहरू सोभियत संघको पतन पछि फर्कन सक्षम थिए । १९९० को शुरुवातमा साढे दुई मिलियन मानिसहरू फर्किए, तर युक्रेन अझै पनि गम्भीर बेरोजगारी र गरिबीको सामना गरिरहेको थियो । क्राइमियन टाटारहरूको सम्बन्धमा भूमि अधिकार र भागबन्डामा निरन्तर तनाव थियो । यो एक विवादास्पद मुद्दा थियो ।
युक्रेनमा नाजी कब्जा
जब रूसी साम्राज्य पतन भयो, केन्द्रीय राडा परिषद १९१७ मा कीभ मा स्थापित भएको थियो । युक्रेनले सन् १९१८ मा स्वतन्त्रता घोषणा गरेको थियो । तर धेरै प्रतिस्पर्धी सरकारहरूले पूरै युक्रेनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे, र परिणाम स्वरूप, गृहयुद्ध सुरु भयो ।
अर्कोतर्फ, जब रुसी रेड आर्मीले युक्रेनको दुई तिहाइ भूभाग जितेर सन् १९२१ मा युक्रेनी सोभियत समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । युक्रेनको बाँकी एक तिहाइ पोल्याण्डमा सामेल भयो । १९२० मा, सोभियत सरकारले युक्रेनको भाषा र संस्कृतिलाई बढावा दियो, तर धेरै राजनीतिक अवस्था र प्रतिबन्धहरू सहित । तर अर्को दशकमा फेरि यो स्वतन्त्रता खोसियो । १९३९ मा, सोभियत संघले नाजी-सोभियत सन्धिको सर्तहरू अन्तर्गत, पहिले पोल्याण्डको अधीनमा रहेको पश्चिमी युक्रेनलाई पनि गाभ्यो । तर त्यसपछि स्थिति परिवर्तन भयो र १९४१ मा नाजीहरूले युक्रेन कब्जा गरे । १९४४ सम्म, यो नाजीहरूको कब्जामा थियो, जसको कारण युक्रेनले युद्धबाट धेरै पीडा भोग्नुपरेको थियो । युक्रेनमा नाजी जर्मनीसँग लड्दा ५० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो । यहाँका १५ लाख यहूदीहरूमध्ये अधिकांश नाजीहरूले मारेका थिए ।
यसैबीच युक्रेनका केही संगठनहरूले सोभियत शासनविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेका थिए । १९५४ मा अचानक एक कदम उठाउदै सोभियत नेता निकिता ख्रुश्चेभले क्रिमिया प्रायद्वीपलाई युक्रेनमा गाभेका थिए । यसैबीच, सोभियत शासन विरुद्ध युक्रेनी विद्रोही सेनाको सङ्घर्ष अन्तिम कमाण्डरलाई कब्जामा लिएपछि समाप्त भयो । तर १९६० को दशकमा युक्रेनमा सोभियत शासनको विरोध बढ्यो । १९७२ मा, जब सोभियत शासनको विरोध गर्नेहरूलाई दमन गरियो र क्रोध बढ्यो । १९९१ मा मास्कोमा भएको सत्ता कब्जाको प्रयासका बिच युक्रेनले आफ्नो स्वतन्त्रता घोषणा गर्यो । ९० को दशकमा सोभियत संघको विघटनपछि करिब २५ लाख क्रिमियन टाटारहरू र उनीहरूका सन्तानहरू क्रिमिया फर्के ।
स्टालिनको पालामा निर्वासनमा परेका यिनीहरू नै थिए । सन् १९९४ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा लियोनिद क्रभचुकलाई पराजित गर्दै लियोनिद कुचमाले यो पद हासिल गरेका थिए । उनले पश्चिम र रुससँग सन्तुलन कायम गर्ने नीति अपनाए ।
१९९६ मा युक्रेनले नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान अपनायो र नयाँ मुद्रा, रिव्निया जारी गरियो । सन् २००२ को मार्चमा भएको आम निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत ल्याउन सकेनन् । दलहरूले राष्ट्रपति कुचमाको विरोध गर्दै निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप लगाएका थिए ।
यसै वर्षको मे महिनामा सरकारले नाटोमा सामेल हुने औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । पुटिन युक्रेन कुनै पनि हालतमा नाटोमा सामेल भएको चाहँदैनन्।
रुसको समर्थनमा राष्ट्रपति बनेपछि युक्रेनको एजेन्डा परिवर्तन भयो
फेब्रुअरी २०१० मा, रूस समर्थित भिक्टर यानुकोविच युक्रेनी राष्ट्रपति चुनावको दोस्रो चरणको विजेता घोषित गरियो । यस वर्षको जुनमा, संसदले नाटोमा सामेल हुने योजनाको बिरूद्ध मतदान गर्यो । नोभेम्बर २०१३ मा, युक्रेनले युरोपेली संघमा सामेल हुने निर्णयबाट पछि हट्ने निर्णय गर्यो । यसको विरोधमा हजारौं मानिस सडकमा उत्रिए । रुसको दबाबमा यो कदम चालिएको उनीहरुको आरोप थियो । फेब्रुअरी २०१४ मा, कीभमा ७७ प्रदर्शनकारीहरू मारिएका थिए । यसपछि राष्ट्रपति यानुकोविच भागेर रुस गए र विपक्षी सत्तामा आए ।
यसैबीच, रूसले क्रिमियालाई आफुमा गाभ्न शक्ति प्रदर्शन गर्‍यो, जसले शीत युद्धदेखि रूस र पश्चिमबीचको तनाव बढाएको थियो । अमेरिका र युरोपेली संघले रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाए । युक्रेनको स्वतन्त्रता पछि, स्थानीय रूसी समुदायले क्रिमियाको सार्वभौमसत्ता र रूससँग बलियो सम्बन्धको पक्षमा खुलेर बोल्न थाले । रुसी नेताहरूको यी कदमलाई युक्रेन सरकारले असंवैधानिक घोषणा गरेको थियो । १९९६ मा, युक्रेनको संविधानले क्रिमियालाई स्वायत्त दर्जा दिने निर्णय गर्‍यो, तर क्रिमियाको कानून र व्यवस्था युक्रेनले नै निर्धारण गर्नेछ ।
क्रिमियाको आफ्नै संसद र कृषि, सार्वजनिक पूर्वाधार र पर्यटन सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार दियो । अर्कोतर्फ, क्रिमियन टाटारहरूको पनि अनौपचारिक रूपमा आफ्नै संसद, मजलिस छ । आफ्नो अधिकार र हितको लागि आवाज उठाउनु यसको उद्देश्य हो ।
सेभास्टोपोलको क्रिमियन शहरको बन्दरगाह एक प्रमुख नौसेना आधार हो र १७८३ देखि कालो सागर ठूला जहाजहरूको लागि आधार भएको छ । सोभियत संघको पतन पछि, यी जहाजहरू युक्रेन र रूस बीच विभाजित गरियो ।
सेभास्टोपोलमा रूसी जहाजहरूको उपस्थिति रसिया र युक्रेन बीचको तनावको केन्द्र हो । २००८ मा, युक्रेनी राष्ट्रपति, पश्चिमी देशहरु द्वारा समर्थित, रूसको जर्जियासंग टकरावको समयमा काला सागरमा जहाजहरुको उपयोग नगर्नको लागी आग्रह गरे । दुवै देशले रुसी जहाजलाई सन् २०१७ सम्म ब्ल्याक सीमा रहन दिने सहमति गरेका थिए । तर पछि सस्तो रुसी ग्यासको सट्टामा यसलाई २०१७ बाट थप २५ वर्षका लागि थपिएको थियो ।
२०१४ को आक्रमण
अप्रिल २०१४ मा, रुस समर्थक सशस्त्र समूहहरूले रूसी सीमा नजिकका केही क्षेत्रहरू कब्जा गरे । यसैबीच, मे महिनामा, पश्चिम समर्थक व्यापारी पेट्रो पोरोसेन्को चुनाव जितेर राष्ट्रपति बने । अर्कोतर्फ पूर्वी युक्रेनमा द्वन्द्व चलिरहेको थियो । जुलाईमा, रुस समर्थक सेनाहरूले द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा उडान गरिरहेको मलेसियाली विमानको एक यात्रुलाई "गोली हाने" र जहाजमा रहेका सबै २९८ जनाको मृत्यु भएको थियो । युक्रेनमा सन् २०१४ को अक्टोबरको चुनावमा पश्चिम समर्थक दलहरूले स्पष्ट बहुमत पाएका थिए ।
२०१६ सम्म, युक्रेनको अर्थतन्त्र ट्रयाकमा फर्किन थाल्यो । जुलाई २०१७ मा, युरोपेली संघ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो र सेप्टेम्बर १ देखि, युक्रेनले युरोपेली संघसँग सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । यसपछि मे २०१८ मा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले दक्षिणी रुसलाई क्रिमियासँग जोड्ने पुलको उद्घाटन गरेका थिए । युक्रेनले यो कदमलाई गैरकानुनी भनेको थियो । दुवै देशले एकअर्कामाथि पटक–पटक गम्भीर आरोप प्रत्यारोप गर्दै आएका छन् । अब फेरि रुस र युक्रेन आमनेसामने भएका छन् । रुसले युक्रेनमा जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्ने अमेरिकाले जनाएको छ ।
मार्च ९, २०१५ मा, रूसी राष्ट्रपति पुटिनले पहिलो पटक स्वीकार गरे कि क्रिमियालाई आत्मनिर्णयको लागि जनमतसंग्रहको हप्ता अघि रूसमा सामेल हुन आदेश दिइएको थियो । रुसले मार्च १८, २०१४ मा क्रिमियालाई औपचारिक रूपमा गाभेको थियो ।
पुटिनले टिभीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा फेब्रुअरी २२ को रातबाट क्रिमियाको फिर्ता सुरु भएको बताएका थिए । पुटिनले यसअघि ८० प्रतिशत क्रिमियाली नागरिकले रुससँग मिल्ने पक्षमा मतदान गरेको र त्यसपछि आफूले विलय गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए ।
रुसले फिनल्याण्डका दुई कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्यो
काठमाडौँ । रुसले फिनल्याण्डका दुई कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरेको छ । रुसी विदेश मन्त्रालयले दुई फिनल्याण्ड कूटनीतिज्ञको निष्कासनलाई गत महिना फिनल्याण्डमा दुई रुसीलाई निष्कासन गरेको प्रतिक्रियाको रूपमा आएको बताइएको
मत परिणाम बारे बाबुरामको प्रतिक्रिया- जनतामा विकल्प भएन, दलहरुसँग सन्तुष्ट छैनन्
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जनता स्थापित दलहरुसँग सन्तुष्ट नरहेको बताएका छन् । गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको
फिनल्याण्ड र स्वीडेनको नेटो सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने निर्णय गम्भीर गल्ती- रुस
मस्को । रुसले सोमबार चेतावनी दिदै फिनल्याण्ड र स्वीडेनको नेटो सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुने निर्णयहरू गम्भीर गल्ती हुने बताएको छ । "यो अर्को गम्भीर गल्ती हो जसको दूरगामी परिणामहरू छन्," उप
मस्को [रुस] । रुसको सबैभन्दा ठूलो बिजुली कम्पनी राओ नर्डिकले आपूर्ति गरिएको बिजुलीको भुक्तानी नगरेको कारण शनिबारदेखि फिनल्याण्डलाई बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको छ । कम्पनीकाअनुसार बिजुलीको भुक्तानी प्राप्त गर्न केहि समस्याहरू